Anosiala Ambohidratrimo : Nirefodrefotra ny basy, jiolahy roa lavon’ny zandary – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:58
Accueil/Songadim-baovao/Anosiala Ambohidratrimo : Nirefodrefotra ny basy, jiolahy roa lavon’ny zandary
Anosiala Ambohidratrimo : Nirefodrefotra ny basy, jiolahy roa lavon’ny zandary
Nisehoana fanafihana mitam-basy mahery vaika tao amin’ny fokontany Tsarahonana, anatin’ny kaominina Anosiala, ny sabotsy nifoha alahady teo. Nifanehatra tamin’ny zandary izy ireo ka raikitra ny fifanjevoana. Roa tamin’ireo jiolahy no lavon’ny balan’ny mpitandro filaminana, raha tafaporitsaka kosa, ny namany miisa telo…
Rado Harivelo 11 janvier 2021
Nitrangana fanafihana mahery vaika tao amin’ny Kaominina Anosiala, Ambohidratrimo, ny alin’ny asabotsy hifoha alahady lasa teo. Raha ny angom-baovao, dimy lahy no nanao ny fanafihana, izay nitondra basy vita gasy sy antsy lavalela. Tsy nitsitsitsy ireo jiolahy rehefa manafika fa sady mandroba. Tsy afa-nikofoka ireo olona tao an-trano vokatry ny fitondran’ireo olon-dratsy fitaovam-piadiana. Vokany, vola mitentina 1 tapitrisa ariary, niampy finday maro sy enta-madinika no voaroban’ireo olon-dratsy ireo tao amin’ilay tokantrano izay tsena tao amin’ny fokontany Tsarahonana. Manoloana ity asa fandrobana nataona ireto andian-jiolahy ireto, ny roa tamin’izy ireo no maty voatifitry ny Zandary avy ao amin’ny Kaompania Ambohidratrimo, izay notarihin’ny kapiteny, Kaomandin’ny kaompania nandritra ny fifanjevoana, tetsy amin’ny kaominina Anosiala. Nidina teny an-toerana ny zandary raha vao nahazo antso tamin’ny sefo fokontany. Nifanehatra tamin’ireo olon-dratsy izy ireo, no sady nitifitra ireto farany. Raikitra ny fifampitifirana, ka lavo ny iray niaraka tamin’ny basy poleta vita gasy iray.
Nakana alika mpitsongo dia…
Rehefa nanao ny fisavana sy ny fisafoana ny manodidina ireo zandary, dia nahita rà teny amin’ny tany, ary nanohy ny fikarohana sy ny fanarahan-dia ireo olon-dratsy. Tetsy andaniny, nakana alika mpitsongo dia ihany koa hikarohana ireo olon-dratsy. Nanodidina ny tamin’ny 8 ora maraina, tsikaritra tsy lavitra ilay toerana nisian’ny fifandonana ny iray tamin’ireo olon-dratsy, izay efa naratra mafy sy tsy afaka nitsangana intsony. Nentina teny amin’ny hopitaly izy io, saingy teny an-dalana dia tsy tana ny ainy. Roa, araka izany, no lavon’ny balan’ny mpitandro filaminana, raha telo tafatsoaka, ka ny iray dia maratra koa nandritra ny fifampitifirana tamin’ny zandary. Ireto andian-jiolahy ireto, no nampihorohoro ny Kaominina Anosiala, nanomboka ny 2 janoary lasa teo. Vokatry ny ezaka nataon’ny zandary sy ny fiaraha-miasa tamin’ny fokonolona dia izao rava izao izany. Mitohy ny fanaovana haza lambo ireo jiolahy mpampihorohoro amin’iny faritra Marovatana iny.
FANJAKANA MALAGASY : Vonona hanamafy ny fiarahamiasa amin’i Arabie Saoudite
ONIVERSITEN’I TOAMASINA : Voaporofo ny fitantanana gaboraraka sy ny tsy fanarahan-dalàna
FANITARANA NY SERANAN-TSAMBON’I TOAMASINA : Hanampy amin’ny fampidinana ny vidin’entana